DYNAMITE & OBEY Hoodie na Trouser - The Kdom
Home New abịa DYNAMITE & OBEY Hoodie na Trouser
Black / S Gray / S Pink / S White / S Black / M Gray / M Pink / M White / M Black / L Gray / L Pink / L White / L Black / XL Gray / XL Pink / XL White / XL Black / XXL Grey / XXL Pink / XXL White / XXL Black / XXXL Grey / XXXL Pink / XXXL White / XXXL Black / 4XL Agba ntụ / 4XL Pink / 4XL White / 4XL
ZỤTA YA UGBU A!
** Achọtala n'ime ụlọ ndị ọzọ **
Ọ dịghị ihe dị mma karịa omenala emere DYNAMITE & OBEY Akwa Ogo Cotton Hoodie na Trouser ejiri ihe eji eme ihe kacha mma. Anyị Bangtan Boys DYNAMITE Merch ka emere n'ụlọ anyị na steeti ebe a na-ebi akwụkwọ nka.
Họrọ ụdị ọkacha mmasị gị pịa ma pịa "ZỤTA YA UGBU A!" wee gaba n'ihu maka ndenye ọpụpụ.
enwe FREE IPMIPAKA WWA ...
Abata na 10-14 !!!bọchị !!!
Mechie ejiji KPOP gi taa!